U-Mona, isibani sikanozungezilanga sazivumelanisa ne-Afrika - Afrikhepri Fondation
NgoLwesibili, Mashi 9, 2021
UMona, isibani selanga esivumelaniswe ne-Afrika
IUmsunguli wobuzwe baseCongo (iCongo-Brazzaville), owayehlala eFrance, u-Edgar Hardy wakha isibani selanga asibiza ngokuthi uMona, okusho ukuthi “ukubona” ngesiLingala. Lo msunguli wafunda e-Ecole Centrale de Paris futhi kubambisene nalokhu lapho wenza khona isibani saseMona njengosomabhizinisi. Ngempela, u-Edgar Hardy uhola iSolar21, inkampani yakhe.
Ngesikhathi eseyingane, kwakudingeka angene ngaphansi kwezibani zemithambo eyinhloko ukuze afunde futhi afunde ngoba wayengenawo ugesi ekhaya. Nanamuhla, amaphesenti amancane kakhulu ama-Afrika athola ugesi njalo. U-Edgar Hardy, ekwakheni isibani sakhe selanga, angathanda ukunikeza esinye isixazululo esifaneleke kangcono kunesibani sikaphalafini noma ikhandlela kulabo abaphucwa ugesi.
Isibani saseMona sinikeza indawo yokukhanyisa engaba kusuka ku-15 kuye ku-25 m²; ngakho-ke kufanelekile ukusetshenziswa kwasekhaya nakwebhizinisi. UMona usebenzisa ubuchwepheshe obusha be-LED (ama-diode-emitting diode) kanye namaphaneli we-photovoltaic (amaphaneli elanga) akhuthaza ukukhanya okukhulu endlini. Okunye kokuqalwa kwayo ukuthi ingasetshenziswa njengesibani sedeski noma njengesibani sodonga. Futhi ifakwe okukhipha i-USB nesokhethi lokushaja iselula, inesisindo esingu-800g futhi inezilinganiso ezilandelayo: 25cm x 17cm x 5,5cm.
UMona unokuzimela phakathi kuka-5h no-9h kuye ngemodi yokusetshenziswa (Ephakeme noma Ephansi) lapho kusetshenziswa amabhethri e-2,3v (2,800mA). Lokhu kuzimela kuphakathi kuka-3,5h no-6h lapho kusetshenziswa amaphaneli we-photovoltaic, ngemuva kokushaja isibani elangeni cishe ngo-6h. Isibani se-1w se-LED sinesikhathi seminyaka eyi-17.
U-Edgar Hardy uthole ukwesekwa yiHaute Normandie Regional Innovation Agency ukuklama nokuthuthukisa isibani saseMona. Njengamanje ibhalwe yizitolo zeNature & Découverte ezizoyimaketha eFrance, eBelgium naseSwitzerland ngenani elihluka phakathi kwama-euro angama-50 kuya kwangama-60; okuhlala kungafinyeleleki kubantu abaningi base-Afrika abahlala e-Afrika, ingasaphathwa eyokuthi ngaleli nani kuzodingeka ukuthi kufakwe intela yamasiko nezintela, ngaphezu kwentela eyengeziwe (VAT). Ukuvumela abantu base-Afrika kanye nawo wonke umhlaba ofakwe ugesi ukuthi bathole isibani saseMona, u-Edgar Hardy ucabanga ngenye indlela yokusabalalisa: uxhaso lwezinkampani.
Isibani saseMona sithole umklomelo WOKUSUNGULA NOKUSASA esifundeni saseHaute Normandie, eFrance; ekhombisa umlingiswa omusha wokutholwa kuka-Edgar Hardy.
Ngalesi sibani sonozungezilanga, u-Edgar Hardy uyakufakazela futhi, ukuthi ngaphansi kwezimo ezifanele zokucwaninga nokuthuthuka kwezobuchwepheshe, ama-Afrika angakwazi ukwenza ubuhlakani obunamandla futhi abe neqhaza ekuthuthukiseni izwe lawo. Ngabe sisengakungabaza ngokungathi sína?